Caseguru | မိုဘိုင်းလ်ထုတ်ကုန်များ, ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်ပို ....
Caseguru ထုတ်ကုန်များကိုသင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒါ့အပြင် Amazon.com ရယူနိုင်ပြီဖြစ်လိမ့်မည်! Posted by ကို : ဂျေးအလီ ဂျေးအလီ
သြဂုတ်လ 7th, 2015 မှတ်ချက် Leave
ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီ Caseguru ကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်® products will be available soon on Amazon.com အဖြစ်ကောင်းစွာ. To purchase from Caseguru.com directly click on ‘ကုန်ဆိုင်‘ မီနူးထဲမှာ Link ကို.
Samsung ရဲ့ Next ကိုက Galaxy စမတ်ဖုန်းသြဂုတ်လ 13 ရက်နေ့မှကြေညာမည် Posted by ကို : ဂျေးအလီ ဂျေးအလီ
ဇူလိုင်လ 28, 2015 မှတ်ချက် Leave
Samsung ရဲ့ Next ကိုက Galaxy စမတ်ဖုန်းသြဂုတ်လ 13 ရက်နေ့မှကြေညာမည်
Samsung ကအထုပျအပိုးဖွေဖြစ်ရပ်သြဂုတ်လပေါင်းသည်တလုံးထားသည် 13 လင်ကွန်း Center ကနယူးယောက်မြို့မှာ. အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာချွတ် kicks 11 a.m. အရှေ့, မှာတံခါးရွက်ကိုဖွင့် 10 a.m. (ထုံးစံအတိုင်း, CNET မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပွဲကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။) ပိုပြီးဖတ်ပါ
OnePlus2ကြိုတင်မှာကြားထားစာရင်းပြီးသားတံခါးဖွင့် Posted by ကို : ဂျေးအလီ ဂျေးအလီ
ဇူလိုင်လ 25 ရက်, 2015 မှတ်ချက် Leave
ဖိတ်ခေါ်မှုကိုဝယ်ယူဖို့များအတွက်မှတ်ပုံတင်စာရင်းဖွင့်ဖွင့်လှစ် OnePlus OnePlus 2. မြျှောလငျ့စှာ, ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသည် သွား. ပြီးနောက်သင် posting မိနစ်ကိုမြင်လျှင်, စာရင်းကိုပြီးသားပေါ်မှာအတွက်ပိတ်ပစ်ဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်, 20,000 လူထု. ပိုပြီးဖတ်ပါ
Samsung က Galaxy Note တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်များ5Posted by ကို : ဂျေးအလီ ဂျေးအလီ
ဇူလိုင်လ 24 ရက်နေ့, 2015 မှတ်ချက် Leave
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, Samsung က
မှတ်ချက်: အဆိုပါ Samsung Galaxy Note5သြဂုတ်လ 12 ရက်နေ့ကထင်ရှားလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်ထင်ရှားင်ပြီးနောက်, device ကိုအများအပြားသယ်ဆောင်အပေါ်သြဂုတ်လ 21 ရက်ကနေကမ္ဘာတဝှမ်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. အသစ်ကူးစက်ခံရသူစျေးကွက်လှုပ်ခတ်အဖြစ် this post မကြာခဏ updated လိမ့်မည်. ပိုပြီးဖတ်ပါ
နောက်တစ်ခု Caseguru နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ
လူကြိုက်များသော မကြာသေးမီ iPhone ကို7Ever အဆိုပါအပါးလွှာဆုံး iPhone ကို Be မှ
ဇွန်လ 20, 2015 IOS ကို9နီးပါးအားဖြင့် iPhone နှေးနိုင်ပါစေ 40% ပိုဘက်ထရီသက်တမ်းညှစ်ဖို့.
ဇွန်လ 26 ရက်, 2015 15 ဆမ်ဆောင်းရဲ့ Galaxy S6 / S6 Edge နှင့်အတူပြဿနာများ – သူတို့ကို Fix လုပ်နည်း
ဇူလိုင်လ 4th, 2015 iPhone ကို 6S သင်နှိပ်နိုင်သည်မျက်နှာပြင်ရပါလိမ့်မယ်!, ပိုကောင်းကင်မရာများနှင့်ကြီးမားသောဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးပြီး
June 19th, 2015 Caseguru ထုတ်ကုန်များကိုသင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒါ့အပြင် Amazon.com ရယူနိုင်ပြီဖြစ်လိမ့်မည်!
သြဂုတ်လ 7th, 2015 Caseguru ထုတ်ကုန်များကိုသင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒါ့အပြင် Amazon.com ရယူနိုင်ပြီဖြစ်လိမ့်မည်!
သြဂုတ်လ 7th, 2015 25 တူညီသည့်အ Windows ကို 10 ပြဿနာတွေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကို Fix ဖို့
သြဂုတ်လ 3rd, 2015 Samsung ရဲ့ Next ကိုက Galaxy စမတ်ဖုန်းသြဂုတ်လ 13 ရက်နေ့မှကြေညာမည်
ဇူလိုင်လ 28, 2015 OnePlus2ကြိုတင်မှာကြားထားစာရင်းပြီးသားတံခါးဖွင့်
ဇူလိုင်လ 25 ရက်, 2015 Samsung က Galaxy Note တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်များ 5
ဇူလိုင်လ 24 ရက်နေ့, 2015 Olga အန်နာ: သိပ်ဂျေး Ali ကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်, ကဆောင်းပါးကြောင့်ဃသည်အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ် ..
ဂျေးအလီ: မြတ်ဖြစ်လိမ့်မည် ! ကျေးဇူးတင်ပါသည် ..
solidworks: ဗီဒီယိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျနော် IOS9 ဘက်ထရီကိုကယ်တင်လိုအပ်ပါတယ် ..
VJY: မကြာမီ BbY ဦးရ ............... ..
Basir: ကိုယ့် iPhone lova7..